El Toro: Mgbasa ozi ezubere iche maka IP, Cookieless Geographic Advertising | Martech Zone
Anyị gbara ajụjụ ọnụ n’oge na-adịbeghị anya Marty Meyer na ọkwa mgbasa ozi ya dị egwu, El Toro. Maka ụlọ ọrụ ọ bụla emeela mkpọsa geotargeted, ị maara etu usoro a siri sie ike. Adreesị IP na-agbanwe agbanwe, ma ikwenye na ha ziri ezi bụ nnukwu nsogbu. Nke ahụ bụ ihe ikike teknụzụ El Toro nwere ikike, patent na-echere ndị ahịa ya.
Nke ọ bụla El ToroNgwaahịa ọgụgụ isi IP sitere na algorithm Targeting nke na-akpata ọgba aghara na ụlọ ọrụ ahụ. Lee ụfọdụ ngwaahịa ha kachasị ewu ewu:
Ezinaụlọ IP ezubere iche - Ebumnuche IP anaghị eji kuki, nke ahụ na-agbanwe agbanwe na ụwa mgbasa ozi dijitalụ. El Toro patented IP algorithm na-ekpebi IP address dabere na adreesị anụ ahụ, nke a na-ejizi maka mgbasa ozi dijitalụ ezubere iche na ọkwa IP / router. Ezinaụlọ IP ezubere iche bara uru maka ndị mgbasa ozi n'ihi na ọ na-etinye data na-anọghị n'ịntanetị; ya bụ, aha ndị ntuli aka e debara aha ha n’akwụkwọ, ọdụ data ndị ahịa, data e gosipụtara, na ozi data ziri ezi.
Ọnọdụ Replay - Ebe a na-eme egwuregwu na-enye gị ohere ijide ID nke ndị mmadụ na ihe omume ha na-aga, ebe ha na-arụ ọrụ, ebe ha na-amụ ihe, ebe ha na-azụ ahịa, ha niile na-ezube ịkpọsa ndị ahịa a bara oke uru. Emere nke a site na iji geoframing, teknụzụ nke El Toro kere. Na Venue Replay, El Toro nwedịrị ike ịlaghachi na oge ma weghara ngwaọrụ sitere na ihe ndị merenụ ruo ọnwa isii gara aga! Ebe a na-eme egwuregwu na-ekwupụta adreesị ụlọ nke ngwaọrụ ndị a hụrụ na mmemme a họọrọ. Site n'ebe ahụ, anyị na-enwe ike ịdabere na netwọk ụlọ ahụ na mgbasa ozi ọkọlọtọ dijitalụ site na iji teknụzụ kachasị mma, Targeting IP.
Gbanwee mgbakwunye - El Toro nwere ike iburu adreesị IP ndị na-enweghị aha, wee gbaa ha ọsọ site na ha Gbanwee mgbakwunye algọridim na-ekpebi ụlọ anụ ahụ ha ma ọ bụ adreesị ụlọ ọrụ ha. Ma ọ bụ tinye ụzọ ọzọ, anyị na-ewere adreesị IP nke ndị ọbịa na saịtị ahụ, chọta adreesị anụ ahụ ha, ma na-enye ndị ụdị ohere iziga ha ozi iberibe ozi ezubere site na otu n'ime ndị mmekọ ozi ahọpụtara El Toro n'ime awa 48 nke nleta saịtị.
Ndị Dijitalụ Ọhụrụ - Digital New Movers (DNM) ka enyere n’onwa isii na ọnwa iri na abụọ. Ihe niile ị ga - eme bụ ịhọrọ nke koodu ZIP, obodo, na / ma ọ bụ steeti ịchọrọ ịchọta, tinye mmetụta kwa ọnwa, bulite ihe okike ma kpebie ma ịchọrọ ịche Pre-Movers, Escrow, na / ma ọ bụ Post-Movers. Usoro El Toro bụkwa ihe mmemme, na-enye gị ohere ịnọdụ ala ma zube ndị ọhụụ ọhụụ nke abụọ ozi ahụ dị.
E webatara El Toro site n'aka ndị mmekọ anyị na Digital Charisma. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ chọrọ ịnwale ụfọdụ mkpọsa ma ọ bụ chọpụta ozi ndị ọzọ, kpọtụrụ ndị mmekọ anyị na Digital Charisma:
Bido na El Toro
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ụlọ ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma ọ bụ ụlọ ọrụ Fortune 500 ma ọ bụ ndị mgbasa ozi chọrọ ịrụ ọrụ na El Toro:
Soro El Toro rụọ ọrụ
Tags: nke ọmaọdịdị alageotargetingip ezubere icheezubere iche maka ip
Kedu mgbe ị nwere ike ịgbaziri agbaziri ma were onyogho na ntanetị?